Zorin OS 15.1 na-abịa na ndakọrịta kacha mma na Microsoft Office | Site na Linux
Zorin OS 15.1 na-abịa na ndakọrịta kacha mma na Microsoft Office
Obodo Zorin OS kwuputara na Zorin OS 15.1 izugbe zuru oke, mmelite mmezi mbụ maka usoro Zorin OS 15, dabere na Ubuntu 18.04 LTS.
Na-abịa ọnwa isii mgbe Zorin OS 15, Zorin OS 15.1 bụ nke mbụ isi melite na usoro na dị ka mbido mbụ dabere na Ubuntu 18.04 LTS, nke pụtara na ọ nwere Linux Kernel 5.0 maka nkwado ngwaike ka mma, akụkụ dị mkpa. mgbe ọ na-abịa inyere ndị ọrụ oge mbụ ịkwaga na Windows.
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Zorin OS 15.1
N'etiti akwụkwọ akụkọ ọhụrụ nke Zorin OS 15.1 anyị hụrụ nkwekọrịta ka mma na Microsoft Office na LibreOffice, Feral GameMode, teknụzụ nke na - eme Zorin ezigbo egwuregwu ikpo okwu site na ịmepụtakwu akụ sitere na GPU, CPU na RAM na egwuregwu ahụ, yana ahụmịhe kachasị mma maka ndị ọrụ gam akporo nwere ụdị kacha ọhụrụ nke Zorin Connect.
N'elu nke ahụ, Ọdịdị Zorin na-abịa ugbu a na nhọrọ iji họrọ oge nke ụbọchị a gbanwere isiokwu ahụ site na ìhè ruo n'ọchịchịrị, yana atụmatụ ọhụrụ iji mee ma ọ bụ gbanyụọ opacity dị omimi na ikike ịhọrọ isiokwu windo. Zorin 15.1 biara n’udi ohuru nke anakpo Sans Forgetica.
Can nwere ike ibudata Zorin OS 15.1, Zorin OS 15.1 Lite, Zorin OS 15.1 Educational na Zorin OS 15.1 Educational Lite. site na akwukwọ ọrụ. Ndị ọrụ Zorin OS 15 dị ugbu a nwere ike imelite site na iji ngwa ọrụ gọọmentị. Zorin OS 15 Ndị na-azụ ihe kachasị nwere ike ibudata sistemụ ha site na otu njikọ njikọta na-abịa na mail.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Zorin OS 15.1 na-abịa na ndakọrịta kacha mma na Microsoft Office
Kedu ihe ndakọrịta Office Microsoft pụtara, arụnyere Office na Zorin?
Bochs: Mepee Isi IA-32 Kọmputa Emulator
VirtualBox 6.1 dị ugbu a, na-abịa na Linux 5.4 kernel support, accelerated video playback na ndị ọzọ